induction heat heat rolling ne IGBT Induction heater
musha / Applications / Induction Heating / kuburitsa kupisa kupisa kupisa
Category: Induction Heating Tags: kupisa kupisa rolling, high frequency inopisa ichingobhururuka, kupisa kuputika, inopisa rolling induction, unopisa rolling muchina, induction heat heat rolling, induction hot rolling, RF kupisa kupisa rolling
induction heat heat rolling ne IGBT induction heat system
Chinangwa Kupisa denderedzwa regejo discs usati wapisa kupisa (kurodza) maitiro
Chinyorwa Flat Boron simbi discs, OD 460 kusvika 710 mm (18 kusvika 28 ") ukobvu 3.2 kusvika 10 mm (8/64 kusvika 25/64")
Kupisa 725 ° C 1335 ° F
Zvishandiso DW-HF-120 kW kupisa induction sisitimu inoshandisa 2 misoro yebasa, switching system, 4 yakanyatsogadzirwa-makoiri, chiller system
Maitiro Mune PLC system, imwe neimwe yemakina maviri anotenderedza akashongedzerwa neiri kure basa musoro uye ine inotenderera chikuva iyo disc inobatwa yakatwasuka uye inobatwa muchinzvimbo nepakati isina magineti.
ndiro 100 mm zvishoma kuti dhayamita dhayamita. Iyo 250 mm (10 ”) yekupisa coil yakamiswa pamusoro pebanga, ichitenderedza pamberi pekumanikidza roll. Izvi zvinopisa muganhu wese wedhisiki.
Mushure memasekondi mashoma ekupisa, mupendero unosvika pane tembiricha inodikanwa uye dhisiki inoitwa kutendeuka pa30 rpm. Iko kumanikidza kunotenderera padhuze, kuumba unopinza mupendero chimiro. Mhedzisiro yekupedzisira inowanikwa mushure mokutendeuka kwe disc.
Mhedzisiro / Bhenefiti Induction kudziyisa inopa zvakanyanya kukurumidza maitiro kana ichienzaniswa nekutonhora-kutenderera; chimiro chaunoda chinowanikwa mushure memasekonzi mashoma, zvichienzaniswa nemaminetsi mashoma. Hunhu hwesimbi hwedenga rakapedzwa hwakakwirira, nekuti maitiro acho anonyatsoomesa zvinhu.
Iyo michina uye maitiro anozvikweretesa kune robotic otomatiki